Noloshaada oo dhan qaldameen - BGR - WAA KU SAMEE
ACCUEIL » SAYNISKA »Khaldamee noloshaada oo dhan - BGR
Noloshaada oo dhan ayaad ku xumaatay - BGR
Haddii aad tahay orodyahan marathon khibrad leh, jogger hiwaayad ah, ama uun orod markii ay xaaladdu kuu saamaxdo, daraasad cusub ayaa sheegaysa inaad naftaada u samayn doontid raalli ahaantaada adigoo cagahaaga jiidaya ka hor xilliga xiga. Kani khiyaamada muuqata ee iska soo horjeedda wuxuu ka yimid maqaal lagu daabacay Wargeyska Biology ee Tijaabada waxayna leedahay culeys cilmiyeed aad u sareeya gadaasheeda.
Oroditaanka, sharrax cilmi-baarayaasha, ayaa ah wax aan waxtar u lahayn aadanaha. Waxay gubtaa kalooriyo fara badan, laakiin in yar oo kalooriyeyaasha ah oo gubtay ayaa dhab ahaan u adeegta inay lugahaaga ka dhigto inay dhaqdhaqaaqaan, halka tamarta inteeda kale loo adeegsado waxyaabo si caddaalad ah wax u fahma sida taageerada miisaankaaga. Si kastaba ha noqotee, adoo kor u qaadaya waxqabadka lugahaaga adigoo isbeddelaya, waxaad ku hagaajin kartaa dhaqdhaqaaqa buuxa.
Daraasaddan, cilmi-baarayaashu waxay ku tijaabinayeen fikrad mar hore laga arkay dabiicadda. Sida dukumintigu fasirayo, "unugyada guga" ayaa u oggolaanaya xayawaannada qaarkood, oo ay ku jiraan aadanaha, inay lugaha la wareegaan inta ay ordayaan. Si loo xoojiyo saameyntan, saynisyahannadu waxay soo saareen "exotendon" kaas oo, markii lagu dhejiyo cagaha dhexdooda, u oggolaanaya inuu ku socdo tamar yar.
Xaqiiqdii waxay yareynaysaa dadaalkii Elliot Hawkes ee 'dib-u-soo-noqoshada' muddadii xilka loo igmaday. - qoraa daraasadda, ayaa lagu sheegay war qoraal ah. Dabcan, dadku waxay ku socdaan 90 ma ahan daqiiqad kasta. Haddii aad qaadi karto cabbir gaaban iyo dhaqso, waxay yaraynaysaa tamarta loo baahan yahay si dib loogu laabto, laakiin waxay ku qaadataa tamar badan si aad lugahaaga ugu wareejisid si dhakhso badan, marka si dabiici ah uma sameysid. Si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay ka saartaa qarashkan wareejinta lugaha, taas oo macnaheedu yahay inaad si fudud u qaban karto tallaabo 100 tallaabo talaabo ah, taas oo yaraynaysa tamarta loo baahan yahay in la duubo. "
Baarayaasha waxaay sheegeen in inta lagu gudajiray tijaabooyinka, orodka orodka uu kuqancay curaarta oo cagtooda ku dhaweysa isla markiiba. , iyo dheelitirkaan ma uusan saameynin. Markii kooxda laga saaray, raacdeyaashii waxay ku noqdeen howlahoodii caadiga ahaa iyadoon wax dhibaato ah.
Guud ahaan, inta ay raadraacayaan kharashyada tamarta, kooxdu waxay sheegtay inay yareysay tamarkii looga baahnaa socodsiinta 6,4% celcelis ahaan. Tiradan, in kasta oo ay yar tahay, waxay si la yaab leh muhiim ugu noqon doontaa orodka masaafada dheer.
Source Source: Cultura / Shutterstock
isku bedbedeli doono
Ku guuleystaha billadaha abaalmarinta Nobel wuxuu leeyahay aadamigu waa sii degganaan doonaa weligiis adduunka - BGR
Cudurrada galmada la isku qaadsiiyo - waxay u faafaan sida dab-duuleedka Mareykanka - BGR